Trano - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
Anisan’ny tenan’i Kristy isika ary manana iraka hitory ny filazantsara, dia ny vaovao tsaran’i Jesosy Kristy. Inona no vaovao tsara? Andriamanitra dia nampihavana izao tontolo izao taminy tamin’ny alalan’i Jesosy Kristy ary nanolotra famelan-keloka sy fiainana mandrakizay ho an’ny olona rehetra. Ny fahafatesan’i Jesosy sy ny fitsanganan’i Jesosy tamin’ny maty no manosika antsika hiaina ho Azy, hanankina ny fiainantsika aminy ary hanara-dia Azy. Faly izahay manampy anareo ho mpianatr’i Jesosy, hianatra avy amin’i Jesosy, hanaraka ny ohatra nomeny ary hitombo amin’ny fahasoavana sy ny fahalalana an’i Kristy. Miaraka amin'ireo lahatsoratra tiantsika hampita ny fahatakarana, ny fironana ary ny fanohanana ny fiainana ao anatin'ny tontolo tsy milamina voavolavolan'ny soatoavina diso.
kalandrie Fanompoam-pivavahana ao Uitikon
daty 02.07.2022 14.00 PM
ao amin'ny Üdiker-Huus ao amin'ny 8142 Uitikon
Manafatra ny fisoratana anarana maimaim-poana amin'ny anay
gazety «JESOSY JESOSY»
Manorata aminay raha manana fanontaniana ianao! Tsy andrinay ny hahafantatra anao!
NY TENAN'ANDRIAMANITRA NY FINOANA HOPE FOR ALL
Hira ara-pilazantsara tranainy roa fanta-daza no milaza hoe: "Ny trano tsy misy olona miandry ahy" ary "Ny fananako dia eo an-tampon'ny tendrombohitra". Ireo tononkira ireo dia mifototra amin’ny tenin’i Jesosy manao hoe: “Ao an-tranon’ny Raiko misy fitoerana maro. Raha tsy izany, dia ho nilaza taminareo va Aho hoe: Handeha hamboatra ny fitoerana ho anareo Aho? (Jaona 14,2). Matetika no voatonona amin’ny fandevenana ireo andinin-teny ireo, satria mampanantena izy ireo fa hanomana ny valisoa ho an’ny vahoakan’Andriamanitra any an-danitra i Jesosy rehefa maty. Izany ve anefa no tian’i Jesosy holazaina? Tsy mety raha miezaka mampihatra mivantana ny teniny rehetra amin’ny fiainantsika isika nefa tsy mandinika ny tiany holazaina...
Manao ahoana ny fiainanao ankehitriny? Moa ve ianao mitondra enta-mavesatra eo amin’ny fiainana izay manavesatra anao sy mampahory anao? Efa nandany ny herinao ve ianao ka lasa hatramin’ny fetran’izay azonao atao? Mandreraka anao izao ny fiainanao rehefa miaina izany, na dia maniry fialan-tsasatra lalina kokoa aza ianao, dia tsy mahita na inona na inona. Miantso anao hanatona azy i Jesosy: “Mankanesa atỳ amiko, ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana; Te hamelombelona anao aho. Ento ny ziogako ka mianara amiko; fa malemy fanahy sy manetry tena ao am-po Aho; dia hahita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo. Fa malefaka ny ziogako ary maivana ny entako » (Mt 11,28-30). Inona no andidian’i Jesosy antsika amin’ny alalan’ny fiangaviany? Izy…
Amin’ny maha-Kristianina antsika dia mijery ny fahafatesana amin’ny fanantenana fitsanganana amin’ny maty ho avy isika. Ny fifandraisantsika amin’i Jesosy dia tsy vitan’ny hoe miantoka ny famelana ny otantsika noho ny fahafatesany, fa miantoka ny fandresena ny herin’ny ota noho ny fitsanganan’i Jesosy tamin’ny maty ihany koa. Ny Baiboly koa dia miresaka momba ny fitsanganana amin’ny maty eto sy ankehitriny. Io fitsanganana amin’ny maty io dia ara-panahy fa tsy ara-batana, ary misy ifandraisany amin’ny fifandraisantsika amin’i Jesosy Kristy. Noho ny asan’i Kristy, Andriamanitra dia mahita antsika ho nitsangana tamin’ny maty sy velona ara-panahy. Avy amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana Satria ny maty ihany no mila fitsanganana amin'ny maty, dia tsy maintsy ekentsika fa izay tsy mahalala an'i Kristy sy...
MAGAZINA "FAHOMBIAZANA" MAGAZINA «Mifantoka amin'i JESOSY» WKG CURRICULUM
Mitodika aminao aho miaraka amina fanontaniana lehibe iray: inona ny hevitrao momba ny tsy mpino? Heveriko fa fanontaniana tokony hodinihintsika rehetra ity! Chuck Colson, mpanorina ao amin'ny USA of the Prison Fellowship and the Breakpoint Radio program, indray mandeha dia namaly ity fanontaniana ity tamin'ny fanoharana iray: Raha misy jamba manitsaka ny tongotrao na manondraka kafe mafana amin'ny akanjonao, ho tezitra aminy ve ianao? Izy tenany ihany no mamaly fa mety tsy ho antsika izy io, satria tsy mahita ny maso eo alohany ny jamba. Azafady mba tsarovy koa fa ny olona izay mbola tsy nantsoina hino an'i Kristy dia tsy afaka mahita ny fahamarinana eo imasony. Noho ny ...
Taorian’ny fijaliany sy ny fahafatesany ary ny fitsanganany tamin’ny maty, dia imbetsaka i Jesosy no nampiseho ny tenany ho velona tamin’ny mpianany nandritra ny efapolo andro. Afaka niaina imbetsaka ny fisehoan’i Jesosy izy ireo, na dia tao ambadiky ny varavarana mihidy aza, tamin’ny naha-natsangana tamin’ny endriny niova tarehy. Navela hikasika Azy sy hiara-mihinana aminy izy ireo. Niresaka taminy ny amin’ny fanjakan’Andriamanitra sy izay ho toetry ny andro Izy rehefa hanorina ny fanjakany ka hahavita ny asany. Nitondra fiovana lehibe teo amin’ny fiainan’ny mpianatr’i Jesosy ireny fisehoan-javatra ireny. Ny niakaran’i Jesoa tany an-danitra no zava-niainana nanapa-kevitra ho azy ireo ary nampiakarina ho amin’ny « Fetin’ny Fiakarana», izay vao nankalazaina hatramin’ny taonjato fahefatra...
Nanoratra i Shakespeare indray mandeha tao amin'ny tantarany "As You Like It": sehatra iray izao tontolo izao ary mpilalao fotsiny isika olombelona! Arakaraky ny fieritreretana izany sy ny tenin’Andriamanitra ao amin’ny Baiboly no hitako mazava kokoa fa misy zavatra ao anatin’io fanambarana io. Isika rehetra dia toa miaina ny fiainantsika avy amin'ny script voasoratra ao an-dohantsika, script misy fiafarana misokatra. Na iza na iza mifanena amintsika dia manoratra ny script lavidavitra kokoa. Na ny mpampianatra any am-pianarana no milaza amintsika fa tsy ho tonga na oviana na oviana, na ny ray aman-drenintsika mendri-kaja milaza amintsika fa eo amin'ny zavatra lehibe isika...
Andininy «FIOMPIANA GRACE» "NY BAIBOLY" «TENY FIAINANA»